Shanduko yaHuawei kubva kuAndroid kuvhiringidza kuenda kune wekunze weGoogle yanga iri chinjo inoshungurudza mugore rapfuura.
The Huawei P40, iyo foni yemureza ye2020, yakatangwa isina mukana wekuwana masevhisi eGoogle, sezvo Huawei yakaramba ichitevera nzira yayo. Yakanga ichiri mudziyo unogonesa uye unosiya tarisiro yeiyo inotevera Huawei mureza, iyo P50.
Hezvino zvese zvatakanzwa kusvika parizvino.
Kurume 2021 inotarisirwa
Zvishoma zvakataurwa nezve iyo Huawei P50 ichaziviswa. Iyo Huawei P40 yakaziviswa musi wa 26 Kurume 2020, zvichitevera pateni yakaonekwa neHuawei yakatanga michina pazviitiko zvichangopfuura zvetsika Kukadzi Mobile World Congress chiitiko.
Kunyange 2021 isiri kuzoita seyakajairika, isu tichiri kutarisira zororo regore, saka isu tinotarisira kuti iyo Huawei P50, P50 Pro uye P50 Pro + ichaziviswa imwe nguva panosvika Kurume 2021 - kunyangwe hazvo pasina chinhu chingabvumidze izvi.
P50, P50 Pro uye P50 Pro + inotarisirwa
Isu tave kutanga kuona kubuda kunowoneka kweHuawei P50 Pro, kusanganisira imwe kubva @OnLeaks, uyo ane rekodhi yakanaka neyekutanga kifaa chinoratidza. Nehurombo, hapana zvakawanda zvakawanikwa parizvino, kunze kwematanho e159 x 73mm. Izvo zvakangofanana zvakafanana neP40 Pro, saka pamwe hapazove nekuchinja kukuru.
Chokwadi, iyo yechipiri seti yemifananidzo inodonha kubva kune sosi isinganyatso kuvimbika, inoita kunge inoratidza foni iyo yakafanana zvakafanana mukutarisa kune iyo P40 Pro. Shanduko dziri pachena ndiko kuwedzera kweye kamera kamera kumashure uye kufamba kune imwe kumberi kamera.
Zvave zvichitaurwa kuti pachave nemhando nhatu dzakasiyana dzenhare - iyo P50, P50 Pro uye iyo P50 Pro +. Izvi zvinowedzera kana kushoma kutsiva lite, zvakajairwa uye pro mamodheru kubva kuzvizvarwa zvakapfuura.
P50 Pro: 6.6-inch kuratidza, OLED, Quad HD +, 120Hz
P50: 6.1-inch, OLED, Yakazara HD +, 90Hz
Chiratidziro paHuawei P50 Pro chinonzi chiri 6.6-inches uye isu tinotarisira kuti P50 yenguva dzose ive diki. Izvo zvinogona kuzviona zvichiuya pa6.1-inches zvakare, zvichitevera saizi yemhando dzeP40.
Hapana chimwe chinhu chakataurwa pamusoro pekuratidzira, asi isu tinotarisira kuti ive OLED uye tipe 90 kana 120Hz mitengo yekuvandudza. Kugadziriswa kweP50 Pro kunogona kunge kuri Quad HD +, 2640 x 1200 pixels, 120Hz, nepo P50 ingangove izere HD +, 2340 x 1080 pixels, 90Hz.
Zvinonzi Samsung Ratidza uye LG Ratidza ichave ichipa iwo OLED mapaneru emidziyo.
Kirin 9000 / 9000E inotarisirwa
6 / 8GB RAM, 128 / 256GB kuchengetedza
Zvishoma kwazvo zvataurwa nezve Hardware loadout yeinotevera-gen Huawei chishandiso, asi zvinofungidzirwa kuti P50 Pro inoshandisa Kirin 9000 iyo yakaita kutanga kwayo muHuawei Mate 40. Iyi i5nm 5G SoC, inotangisa pamberi peApple uye Qualcomm yakagadzira yavo vaziviso uye zvakajairika kuti Huawei ikumbise iyi Hardware kubva kuMate kuenda kuP akateedzana nenzira iyi. Iyo P50 yakajairwa inogona kushandisa iyo Kirin 9000E, yakaderera zvishoma spec vhezheni ye Hardware.
Kunze kweaya maratidziro, isu hatina chero ruzivo rwehuwandu hwebhatiri, kunyange zvataurwa kuti Huawei's 135W charger inogona kunge iri yekupa mheni-inokurumidza kuchaja.
Imwe pamberi kamera
P50 Pro: Quad kamera yakarongeka
Iyo kamera ndiyo chikamu chemidziyo yeHuawei inotarisirwa kwazvo. Iyo kambani yakarova vakwikwidzi vakuru vakaita seApple uye Samsung kune chibhakera, vachiita-vakwikwidzi vazhinji uye vachiita mamwe ematanho makuru mukutora mifananidzo mbozhanhare mumakore mashoma apfuura.
Kuburitswa kwakaratidza kwakakura kamera kamera yekumashure kwefoni, kunyangwe paine zvishoma kuratidza kuti ichokwadi. Muchokwadi, iko kunyora pane iyo lens yekugara kwakangofanana neyeiyo Huawei P40 Pro, izvo zvinogona kureva kuti ingori nyepera ye Photoshop. Neimwe nzira, Huawei inogona kunge ichigadzirisa iyo iripo system yeP50 nyowani.
Ruzivo irwo rwekunze runongoshanda chete kune malenzi, zvisinei, kwete maseru ari pasi. Chatinogona kuona ndeye periscope telephoto, ichitora 125mm yaive 5x optical paP40 Pro.
Kune imwezve kamera pano, zvisinei, isina kuvharwa neiyo lens tsananguro yekunyora - kuratidza (kana isiri yekunyepedzera) kuti chimwe chinhu chekuita nekuwedzera dhata kutora (kudzika kana ToF) kana iri macro lens.
Asi pane mamwe ma sensors akaiswa pamatanho zvakare, saka pamwe iro rechina lens chinhu chekuita nazvo.
Ndiwo mazuva ekutanga uye kusvika parizvino hatizive izvo zvichawanikwa neHuawei P50 kamera.
Kwete Google Services
Harmony OS muChina
Sezvo iyi isiri yenguva dzose mbozhanhare yeApple, zvakakodzera kuti utaure zvishoma pane software. Isu tinoziva kuti Huawei haigone kupa masevhisi eGoogle uye pachinzvimbo ichi ichisundira yayo yega mhinduro neHuawei Mobile Services yakagara pane Android musimboti.
Huawei ave nenguva yakati ave kuvandudza iyo Harmony OS. Yakave ichishandiswa mune zvimwe zvishandiso, senge smart TV, kusvika parizvino, asi pakagara paine kutaura kuti izvi zvinopa simba nhare dzeramangwana. Harmony OS iri, mukukosha, vhezheni yeApple zvakadaro, saka isu hatingatarisiri shanduko huru kubva kuEMUI yatakaona pamidziyo yeHuawei munguva yakapfuura. Kukurukurirana kunoratidza kuti iyo P50 ichaiswa seHarmony OS mudziyo muChina, ichiri kutumidzwa seye Android mudziyo mune rese pasirese.
Pachine mukana wekunze wekuti kana kumira kwaHuawei neUS kuchinja ipapo masevhisi eGoogle anogona kudzoka - asi isu hatifunge kuti izvi zvichaitika.
Chii chaitika kusvika parizvino?
Heino nguva yekudonha kweiyo Huawei P50 akateedzera kusvika ikozvino.
15 Kukadzi 2021: Mamwe mashoko pamusoro peP50 mhando dzakataurwa
Mumwe wepaTwitter leaker akayera kuti ape rumwe ruzivo nezvekuti ndeapi mamodheru ekutarisira kune iyo Huawei P50.
Uye kana paine chero munhu achiri kushamisika nezve iwo mamodheru.
Standard - itsva Lite
Pro - itsva mwero
Pro + - itsva Pro
- Teme (特米) (@ RODENT950) February 15, 2021
21 Ndira 2021: Huawei P50 uye P50 Pro yakati inoshandisa yakachengeterwa Kirin 9000 machipisi, ipa 90 uye 120Hz zvichiteerana
Gakava kumativi chii chinopa simba rinotevera Huawei zvishandiso zvichiri kuenderera mberi, zviwanikwa zvichiti zvakachengeterwa Kirin 9000 machipisi zvinopa simba iyo P50.
12 Ndira 2021: Zvimwe zvinoita sekufungidzira kudonha kweP50 dzakateedzana
A kudonha kushoma yakaonekwa isina zvishoma kuti iongorore ruzivo, asi inoratidza kuti pachave neHarmony OS uye Android shanduro dzeP50 mamodheru.
5 Ndira 2021: Zviripachena Huawei P50 Pro kuburitsa kunoratidza quad kumashure kamera - asi ichokwadi here?
Images kudai kuti uve iyo Huawei P50 Pro inodonhedza inoratidza kureketa kamera, asi pane zvishoma zvekusimbisa huchokwadi hwavo.
5 Ndira 2021: 135W charger inogona simba Huawei P50
Chaja itsva yeHuawei inogona kuendesa kusvika ku135W yave yakasimbiswa uye inogona kunge irijaja yeramangwana P50 akateedzana.
31 Zvita 2020: Huawei P50 Pro inotora dhizaini yayo yekutanga kudonha
A idonha kubva kunovimbika sosi yakaratidza yakapihwa mufananidzo weiyo ramangwana Huawei P50 Pro.
23 Mbudzi 2020: Huawei P50 kuvhura muna 2021
A chirevo kubva kuThe Elec inokurukura vanoratidzira vatengesi uye zvimwe zvemuchadenga zvemangwana Huawei P50 mamodheru.
Maoko-Pamusoro NeHuawei P50 Pro: Iyo 2022 Flagship ine Snapdragon 888 Option
HUAWEI P50 akateedzana: hezvino izvo zvaunotarisira